Lodge a complaint - isiZulu
SARS Home > Contact Us > How Do I..? > Lodge a complaint - isiZulu
Usizo esifuna ukululetha kuwe
Sifuna ukukusebenzela ngeqophelo eliphezulu ngisho ngabe sibhekene nomsebenzi obandakanye intelangeniso lakho, lenkampani yakho, imisebenzi yakho yokuthekela nokuthekelisa, kumbe enye intela nezinhlawulo esikusingathayo. Siyaqonda ukuba kusemqoka kangakanani ukwenza izinto ngokohlelo, ngakho sihlala sithungatha izindlela esingathuthuka ngazo. Njengengxenye yokuletha izidingo kuwe esiphuculiwe, sesiqale indlela entsha yokuba wethule izinkonondo zakho uma ungekagculiseki ngosizo luka-SARS ngemva kokuba usulandele uhlelo olujwayelekile lokukhononda.
Zintathu izindlela okunconywa ukuba ungakhononda ngazo:
Nge-eFiling, bheka umhlahlandlela ozigabagaba
Vakashela igatsha lika-SARS eliseduze nawe
Ngokushayela Ihhovisi Lokusingatha Izinkonondo (i-CMO) ku-0860 12 12 16.
Ukukhonondo usebenzisa i-eFiling, kufanele ube ngumsebenzisi wayo obhalisiwe ukuze ugcwalise futhi ulethe ifomu. Uma ungakabhalisa cindezela lapha. Ngeminye imininingwane yokukhononda nge-eFiling, bheka umhlahlandlela wethu ozigabagaba.
Isu-ngqangi: Ifomu lokukhononda angeke ukwazi ukulitheza(download) kumbe ukulishicilela nokuliposelwa. Liyifomu eliku-inthanethi elibekelwe ukuba wena uligcwalise kwi-eFiling kuphela kumbe ungaligcwaliselwa ngumsebenzi wakwa-SARS uma uxhumane nabase-CMO, i-Contact Centre, Igatsha noma Umahambanendlwana. Uma usibhalela kudingeka usibeke isikhalazo sakho ngamazwi akho, nokuyilapho-ke umsebenzi wakwa-SARS ezobe esesifaka emigudwini yethu. Khumbula ukuletha inombolo yakho yodaba kanye nenombolo kamakhalekhukhwini kanye nekheli le-imeyili ukuze sikwazi ukukuthinta.
Kunini lapho ukhononda khona?
Uma ungathokozile ngosizo ngemva kokuxhumana okujwayelekile nabakwa-SARS, ungakhononda. Kwezinye izimo singase sidinge ukuba ube nenombolo eliqiniso yodaba lwakho.
Ukukhonondo kungukububula ngenxa yokungeneliseki okwehlele umkhokhintela, umhwebi kumbe ummeleli, okumayelana nohlelo (kubandakanya ukubuza, izimbuyiselo kumbe nayisiphi isicelo sosizo) kumbe usizo okungazange kuxazululwe.
Isu-Ngqangi: Uma kepha kungukuthi uphikisana nemiphumela yokubuyekezwa kwakho kumbe isinquma esithathwe ngu-SARS, siza uveze ukuphikisana kumbe ulandele uhlelo lokuxazulula ukushayisana, bheka umhlahlandlela wokuxazulula ukushayisana. Sicela wazi ukuthi uhlelo lokuxazulala ukushayisana alufani nolwezinkonondo. Uma uphikisana nenhlawulo, kufanele ulandele uhlelo lwe-Isicelo Sokuxegiselwa andukuba uphikise.
Uma ungathokozile ngezinhlelo nemisebenzi ka-SARS, bheka lokhu okulandelayo:
Okulandelayo uluhlu lwezigaba zezikhalazo. Sicela uveze okuyisona sona uma ukhononda:
​Umthetho/Inqubomgomo ​Isibonelo,ikhadi lemali kawuvunyelwe ukukhokha ngalo.
​Ukuziphatha komsebenzi/Ukwazi umsebenzi ​Isibonelo, umsebenzi u-X ubeluhlaza, ubengakwazi ukungisiza.
​Izinkinga zendawo/zobuchwepheshe/zokuxhumana ngoMgudu ​Isibonelo, i-contact centre iyephuza ukuphendula, kumbe ukuhlonga indawo yokupaka egatsheni X.
​Ikhwalithi nesivinini sosizo* ​Isibonelo, isicelo esixazululwe ngokungeyikho, kuthathe izinyanga eziyisithupha ukuguqula imininingwane yami yasebhange.
​Udaba olungaxazululiwe/udaba lokusebenza* ​Isibonelo, isikhathi esibekelwe ukufeza umsebenzi sesidlulile kodwaimbuyiselo yami ayikasetshenzwa.
​Ushicilelo oludukile noma olulahlekile* ​Isibonelo, Ngilethe imbuyiselo yami, kepha abakwa-SARS kabayitholi.
* Ezigabeni ezintathu zokugcina uzodinga inombolo yodaba. Ngamanye amazwi, uma isikhalazo sakho simayelana ‘Nekhwalithi nesivinini sosizo’, ‘Udaba olungaxazululiwe/udaba lokusebenza’ kumbe ‘Ushicilelo oludukile noma olulahlekile,lesi sikhalazo sizokwamukelwa kuphela uma sekuvele kunecala elifakiwe kwafakwa inombolo yodaba efomini. Kungaba yinombolo yodaba yokuqala noma eyokulandelela.
Yini ongayilindela ngemva kokukhononda
Uzothola isaziso nge-SMS kumbe nge-imeyili ezigabeni ezahlukene zalolu hlelo:
Uma usufake isikhalazo, uzothola isaziso sokuqinisekisa lokho ngalo lolo suku.
Usuku lokuxazulula luzokuba ezinsukwini ezingama- 21 ngemva kokufaka isikhalazo.
Uma ungakeneliseki ngemiphumela, ungalandela Uhlelo lukaSobantu (ombuds) Wezentela.
Last Updated: 16/09/2016 9:48 AM ​